International Standard Car Show Will Be Held In Yangon.
ပှဲအစီအစဉျမြား / အထူးကမျးလှမျးမှု ကားပွနျလညျသုံးသပျမြား ကားစငျတာမြား ကားတောငျးဆိုမှုမြား မီဒီယာပွခနျး ဆကျသှယျရနျ လော့ဂျအငျ အကောငျ့ဖှငျ့ အကောငျ့မနေ့တောလား
ကာလ period N/A
International standard car show will be held in Yangon with 1000 new and used cars for people to see and buy cars as they prefer. World favorite and top selling cars will be presented at the car show and free driving tests will be provided. Buyers can choose Payment options: either cash down or payment in installments. "The car show will be of international standard and car prices will be reasonable for the buyers. We are confident that buyers will be able to buy cars with reasonable and right prices", said U Wae Phyo Kyaw, Chief Operating Officer of CarsDB company. Also fun and games activities will be included in the car show.
ရန်ကုန်မြို့တော်တွင် အဆင့်မြင့်ကားအေရာင်းပြပွဲကျင်းပမည်။ ရန်ကုန်မြို့တော်တွင် အဆင့်မြင့်ပြည်ပ ကားအသစ်များ၊တပတ်ရစ်ကားများ အရည်အတွက် ၁၀၀၀ ကျော်ပြသထားပါမည်။ ကမ္ဘာကြိုက် ၊ ရောင်းကောင်းသောကားများကို တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ တပတ်ရစ်ကားကိုမောင်းကြည့်နိင်မည်ဖြစ်ည်။ ငွေပေးချေမုတွင် လက်ငင်းသို့မဟုတ် အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ရောင်းချပေးပါမည်။ ကမ္ဘာကားပြပွဲများလို ခမ်းနားကြီးကျယ်စွာပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပြီး သင့်တင့်သောဈေးဖြစ်ရောင်းချသွားမည်ဖြစ်သည်ဟု ကုမ္ပဏီ ဦးဝေဖြိုးကျော်ကပြောကြားပါးသည်။ ထို့အပြင်လာရောက်ကြည့်ရူသူ၊ အားပေးသူများအား ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲများကျင်းပပေးပါမည်ဟုဆိုပါသည်။
ရနျကုနျမွို့တျောတှငျ အဆငျ့မွငျ့ပွညျပ ကားအသဈမြား၊တပတျရဈကားမြား အရညျအတှကျ ၁၀၀၀ ကြျောပွသထားပါမညျ။ ကမ်ဘာကွိုကျ ၊ ရောငျးကောငျးသောကားမြားကို
တှရေ့မညျဖွဈသညျ။ တပတျရဈကားကိုမောငျးကွညျ့နိငျမညျဖွဈညျ။ ငှပေေးခမြေုတှငျ လကျငငျးသို့မဟုတျ အရဈကစြနဈဖွငျ့ ရောငျးခပြေးပါမညျ။
ကမ်ဘာကားပွပှဲမြားလို ခမျးနားကွီးကယျြစှာပွုလုပျမညျဖွဈပွီး သငျ့တငျ့သောဈေးဖွဈရောငျးခသြှားမညျဖွဈသညျဟု ကုမ်ပဏီ ဦးဝဖွေိုးကြျောကပွောကွားပါးသညျ။
ထို့အပွငျလာရောကျကွညျ့ရူသူ၊ အားပေးသူမြားအား ပြျောပှဲရှငျပှဲမြားကငျြးပပေးပါမညျဟုဆိုပါသညျ။